“ကမ်ဘာ့မယျစင်ျကွာဝဠာပွိုငျပှဲကွီးကို ယှဉျပွိုငျဖို့ အမရေိကနျနိုငျငံကို ထှကျခှာသှားပွီဖွဈတဲ့ အလှမယျဆှဇေငျထကျ” – Cele Gabar
“ကမ်ဘာ့မယျစင်ျကွာဝဠာပွိုငျပှဲကွီးကို ယှဉျပွိုငျဖို့ အမရေိကနျနိုငျငံကို ထှကျခှာသှားပွီဖွဈတဲ့ အလှမယျဆှဇေငျထကျ”
ဒီနေ့ နိုဝငျဘာလ (၂၇)ရကျနမှေ့ာတော့ အလှမယျဆှဇေငျထကျဟာ ကမ်ဘာ့မယျစင်ျကွာဝဠာပွိုငျပှဲကွီးကို မွနျမာကိုယျစားပွုအနနေဲ့ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျရနျအတှကျ အမရေိကနျနိုငျငံကို သှားရောကျနပွေီပဲဖွဈပါတယျ။အလှမယျ ဆှဇေငျထကျဟာဆိုရငျ မွနျမာ့မယျစင်ျကွာဝဠာပွိုငျပှဲကို ဘာအံကိုယျစားပွုအလှမယျတဈယောကျအနနေဲ့ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျခဲ့တာဖွဈပွီး Winner ဆုကွီးကို ထိုကျထိုကျတနျတနျနဲ့ ရရှိခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။မွနျမာ့ကိုယျစားပွုအလှမယျတဈယောကျဖွဈလာကတညျးက နိုငျငံဂုဏျဆောငျနိုငျတဲ့သူတဈဦးအဖွဈတှမွေ့ငျရအောငျ ကွိုးစားမှုတှမြေားစှားပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။
အလှမယျဆှဇေငျထကျသှားရောကျယှဉျပွိုငျမယျ့ ကမ်ဘာ့မယျစင်ျကွာဝဠာပွိုငျပှဲကွီးကတော့ နှဈစဉျကငျြးပပွုလုပျလာတာဆိုရငျ (၆၉)ကွိမျမွောကျရှိနပွေီဖွဈပွီး ဒီနှဈမှာဆိုရငျ အမရေိကနျနိုငျငံ၊ဂြျောဂြီယာပွညျနယျ၊ အတ်တလန်တာမွို့မှာကငျြးပပွုလုပျတာဖွဈပါတယျ။ဆှဇေငျထကျဟာ အခုတဈခေါကျ ကမ်ဘာ့မယျစင်ျကွာဝဠာပွိုငျပှဲကွီးအပွငျ Miss Supranational (2016)ပွိုငျပှဲကွီးကိုလညျး သှားရောကျယှဉျပွိုငျခဲ့ပွီး ထိပျဆုံး(၁၀)ယောကျစာရငျးကို ဝငျနိုငျခဲ့တဲ့ အပွငျ Miss Supranational (2016)ဆုကွီးကိုလညျး ရရှိခဲ့ပါသေးတယျ။
အခုလိုထူးခြှနျပွီးထကျမွတျလှတာကွောငျ့ လတျတလောမှာ သှားရောကျယှဉျပွိုငျမယျ့ ကမ်ဘာ့မယျစင်ျကွာဝဠာပွိုငျပှဲကွီးမှာလညျး နိုငျငံဂုဏျဆောငျနိုငျတဲ့ အလှမယျတဈဦးအဖွဈတှမွေ့ငျရဦးမယျလို့လညျး ပရိသတျတှကေ ယုံကွညျနကွေပါတယျ။ဆှဇေငျထကျကိုယျတိုငျကလညျး ဒီပွိုငျပှဲကွီးအတှကျကို တျောတျောလေးကွိုးစားပွငျဆငျခဲ့တာကိုလညျး တှမွေ့ငျရပါတယျ။CeleGabar ပရိသတျကွီးတှရေော အလှမယျလေး ဆှဇေငျထကျကို အားပေးဝနျးရံဖို့ အဆငျသငျ့ပဲလား….
Source – Swe Zin Htet
“ကမ္ဘာ့မယ်စင်္ကြာဝဠာပြိုင်ပွဲကြီးကို ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ အမေရိကန်နိုင်ငံကို ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်တဲ့ အလှမယ်ဆွေဇင်ထက်”
ဒီနေ့ နိုဝင်ဘာလ (၂၇)ရက်နေ့မှာတော့ အလှမယ်ဆွေဇင်ထက်ဟာ ကမ္ဘာ့မယ်စင်္ကြာဝဠာပြိုင်ပွဲကြီးကို မြန်မာကိုယ်စားပြုအနေနဲ့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန်အတွက် အမေရိကန်နိုင်ငံကို သွားရောက်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အလှမယ် ဆွေဇင်ထက်ဟာဆိုရင် မြန်မာ့မယ်စင်္ကြာဝဠာပြိုင်ပွဲကို ဘာအံကိုယ်စားပြုအလှမယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Winner ဆုကြီးကို ထိုက်ထိုက်တန်တန်နဲ့ ရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာ့ကိုယ်စားပြုအလှမယ်တစ်ယောက်ဖြစ်လာကတည်းက နိုင်ငံဂုဏ်ဆောင်နိုင်တဲ့သူတစ်ဦးအဖြစ်တွေ့မြင်ရအောင် ကြိုးစားမှုတွေများစွားပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အလှမယ်ဆွေဇင်ထက်သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ကမ္ဘာ့မယ်စင်္ကြာဝဠာပြိုင်ပွဲကြီးကတော့ နှစ်စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်လာတာဆိုရင် (၆၉)ကြိမ်မြောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး ဒီနှစ်မှာဆိုရင် အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်၊ အတ္တလန္တာမြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆွေဇင်ထက်ဟာ အခုတစ်ခေါက် ကမ္ဘာ့မယ်စင်္ကြာဝဠာပြိုင်ပွဲကြီးအပြင် Miss Supranational (2016)ပြိုင်ပွဲကြီးကိုလည်း သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ထိပ်ဆုံး(၁၀)ယောက်စာရင်းကို ဝင်နိုင်ခဲ့တဲ့ အပြင် Miss Supranational (2016)ဆုကြီးကိုလည်း ရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။
အခုလိုထူးချွန်ပြီးထက်မြတ်လှတာကြောင့် လတ်တလောမှာ သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ကမ္ဘာ့မယ်စင်္ကြာဝဠာပြိုင်ပွဲကြီးမှာလည်း နိုင်ငံဂုဏ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အလှမယ်တစ်ဦးအဖြစ်တွေ့မြင်ရဦးမယ်လို့လည်း ပရိသတ်တွေက ယုံကြည်နေကြပါတယ်။ဆွေဇင်ထက်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဒီပြိုင်ပွဲကြီးအတွက်ကို တော်တော်လေးကြိုးစားပြင်ဆင်ခဲ့တာကိုလည်း တွေ့မြင်ရပါတယ်။CeleGabar ပရိသတ်ကြီးတွေရော အလှမယ်လေး ဆွေဇင်ထက်ကို အားပေးဝန်းရံဖို့ အဆင်သင့်ပဲလား….
“မိတျကပျ Artist မလေးနဲ့ ခဈြသူသကျတမျး (၅)နှဈပွညျ့သှားပွီဖွဈတဲ့ ကိကိကြျောဇော”
“အထငျအမွငျလှဲမှားအောငျ ပွုလုပျနတေဲ့ Pageအတုကွောငျ့ စိတျရှုပျနရေတဲ့ လှမျးပိုငျ”
“ရနျကုနျမွို့ လူထူထပျရာ လှညျးတနျးဈေးမှာ Mask တှလေိုကျဝပေေးခဲ့တဲ့ အကျစတာ”